Pcb Materials - Shenzhen Anoshamisa Technology Co., Ltd
Chinonyanya kukosha chikamu zvemagetsi ndiyo rakadhindwa redunhu bhodhi (pcb). Rave, asi Acronym rave zvawanikwa akadhindwa wiring pamapuranga uye akadhindwa makadhi wiring, izvo vanotova chinhu chimwe. Nokuda inokosha basa namapuranga izvi zvose kubva makombiyuta macalculator, pcb bhodhi zvinhu kusarudzwa anofanira ashandiswe zvakanaka uye ruzivo kuti magetsi zvinodiwa munhu akapiwa chikamu michina.
Pamberi kukura pcb, wedunhu bhodhi zvakashandiswa kunyanya nokufukidzwa matendere vanobatwa nokukundwazve pindana waya aigona nyore kuti kukundikana pane zvimwe junctures. Zvinogona remudunhu pfupi kamwe zera akabata uye vamwe waya vakatanga kutsemuka. Sezvo zvinogona kutarisirwa, redzidziso muitiro vakaenda wiring pakati pamapuranga izvi mangwanani akanga dzinovhiringidza uye painstaking.
Sezvo kuwedzera dzakasiyana-siyana zuva nezuva yemagetsi zvinoriumba vakatanga kuvimba redunhu pamapuranga, nhangemutange rakanga kutanga nyore, zvikuru chiine inotsiva, uye izvi zvakaita kuti kukura acho, pcb. With pcb zvokuvakisa, matunhu zvinogona vakundwa pakati boka yakasiyana zvinoriumba. The simbi kuti hwezvekukurukurirana kuchinjwa kuitika pakati bhodhi uye chero dzakabatanidzwa zvinoriumba rinozivikanwa solder, izvo zvinobatsirawo chinangwa hunyambiri wayo namira unhu.
Pcb Material Kuronga
The Zvinoumba imwe pcb kazhinji ine akaturikidzana mana, izvo kupisa laminated pamwe chete chete rukoko. Mashoko anoshandiswa pcb inosanganisira zvinotevera akaturikidzana kubva kumusoro kusvikira pasi,
A isingadhuri siyana mapuranga kuvapowo kutengeswa kuti regai kushandisa chete chambotaurwa nezvacho pcb zvinhu, asi pachinzvimbo panofanira phenolics kana epoxies. Nokuda chafariz aikanganiswa pamusoro namapuranga izvi, avanotarisira kurasikirwa lamination yavo nyore. mapuranga isingadhuri izvi kazhinji nyore kuziva maererano munhuwi vanopa kure kana kuitwa soldered.
Zvakaturikidzaniswa mumwe pcb wechipiri imhangura, riri laminated padenga substrate nemuvhenganiswa kupisa uye namira. The rukoko nemhangura dzakatetepa, uye pane dzimwe mapuranga pane mbiri akaturikidzana vakadaro - mumwe pamusoro uye imwe pasi substrate. PCBs pamwe chete chete rukoko hwemhangura vanowanzoyemura kushandiswa isingadhuri Electronics mano.
The massively-kushandiswa mhangura vakapfeka laminate (CCL) inogona Classified muzvikamu zvakasiyana maererano zvakasiyana kupatsanura mitemo kusanganisira muedzo zvinhu, akashandisa nebwe namira, flammability, CCL unongotaura. Pfupi kupatsanura pakati CCL kunoratidzwa mundima inotevera Table 1.
Above uswa soldermask ndiye silkscreen layer iyo inowedzera tsamba uye kusanganiswa zviratidzi kuti vanoita pcb verengeka kuti Tech programmers. Izviwo, inoita kuti zvive nyore zvemagetsi assemblers kuisa mumwe pcb panzvimbo yakakodzera uye mugwara pane mumwe zvinoriumba. The silkscreen rukoko rinowanzova chena, kunyange mavara zvakadai tsvuku, yero, bvudzi uye nhema dzimwe nguva inoshandiswa.
Pcb rukoko Technical Terms
Pamwe chete vanonzwisisa sei pcb riri layered, zviri Zvinokoshawo kuziva zvinotevera hwokugadzira mazwi kuti kuitwawo kushandiswa PCBs:
• Annular mhete. The mhete mhangura kuti runopoteredza makomba pamusoro pcb.
• DRC. An Acronym nokuti kugadzira mutemo cheki. Zvikurukuru, DRC muitiro yokuti magadzirirwe imwe pcb iri zvakaongororwa kwayo functionality. Details kuti zvazvakaipira zvinosanganisira upamhi zvisaririra uye makomba boora.
• Drill corners. Anoshandiswa kurondedzera makomba zvose pamusoro pcb, kana zvakarurama kana zvisizvo. Mune zvimwe zviitiko, buri kungava zvishoma zvisiri nokuda patainzwa kuchera midziyo yaishandiswa panguva kugadzirwa.
• Finger. Metal pachena pamwe bhodhi pamupendero kuti anoshumira unobatanidza pfungwa pakati PCBs maviri. Minwe kunowanzoitwa kuwanikwa musi wakare yevhidhiyo uye ndangariro nemakadhi.
• Mouse matomu. A chikamu bhodhi kuti kwave kunyanya akachera kusvikira apo zvingangoisa mungozi STRUCTURAL kuvimbika ane pcb.
• Pad. An nzvimbo pachena simbi iri pcb, mumugwagwa iyo soldered chimedu iri kazhinji rikashandiswa.
• Panel. A guru redunhu bhodhi idzva namapuranga zviduku, izvo pakupedzisira kuparadzana nomumwe kushandiswa. Chikonzero Tsika iyi kubvisa kuoma kuti handlers vanoona kana toreva nezvokubata namapuranga zviduku.
• namatidza rakanyorwa mabhii rinowanzodhinda mapepa. A simbi rakanyorwa mabhii rinowanzodhinda mapepa pabhodhi, pana iyo namatidza anoiswa pamusoro pokunamatidza.
• Plane. chikamu A hombe pachena mhangura iri pcb, iyo kunoratidzwa nemiganhu asi havana nzira.
• Slot. Chero gomba kuti haisi tenderera. PCBs vane cheap car insurance kazhinji yakakwirira akatemerwa mutengo nokuda kugadzirwa mari rakasikwa shamisa serin'i makomba pamusoro redunhu bhodhi. Cheap car insurance vari yemanyorero kwete kuifukidza.
• Surface negomo. A nzira chingagumbusa zvimwewo zvinoriumba vari hwavapo zvakananga bhodhi pasina kushandiswa kuburikidza maburi.
• Trace. Kuramba mutsetse chemhangura kuyambuka pcb.
• V-zvibozwa. A nzvimbo bhodhi yave omei kuchekwa. Izvi zvinogona kupa pcb pangozi mukakachurwa.
• Via. A gomba iro chiratidzo kufamba pakati akaturikidzana. Vias inoonekwa tented uye untented shanduro. Tented shanduro akafukidzwa unodzivirira soldermask, ukuwo untented vias inoshandiswa connector zvakabatanidzwa.
The nhamba kuti kunotangira marongera zvinoreva nhamba chaiyo pakuitisa akaturikidzana, kungava chinhu hwokutiparadza kana ndege rukoko - maviri rukoko mhando. Akaturikidzana vanowanzotevedzera kuva nhamba 1, kana mana akatevera kunyange nhamba: 2, 4, 6, 8. rukoko mapuranga dzimwe nguva tine shamisa nhamba, asi izvi mashoma uye aizoita asiri mutsauko. Somuenzaniso, mashoko pcb acho ane 5 rukoko kana 6 rukoko bhodhi kwaizova husingakuvadzi zvakafanana.
Vaviri rukoko mhando vaine mabasa. Hwokutiparadza akaturikidzana iine makwara. Plane akaturikidzana kushanda nesimba connectors uye ndege chinhu mhangura. Plane akaturikidzana zvimwe zvitsuwa kuti ateme zvichikurukura chinangwa bwepuranga, kungava 3,3 V kana 5 V.
FR4 ndiro zita yekubvuma kuti girazi-Akazadzisa epoxy laminated machira. Nokuda simba raro, uyewo kukwanisa kwayo kukurira unyoro uye moto, FR4 ndeimwe inonyanya kufarirwa pcb zvinhu.
Zvimwe pcb Design nezvavanofunga
A Nhamba akadai 1,6 mm rinoshandiswa kuratidza pakukora marongera bhodhi. On 4 rukoko mapuranga, 1,6 mm ndiye mureza nechiyero. Ukobvu chinhu kurinda kuti paunenge uchisarudza mapuranga zano. Mapuranga zvikuru ukobvu Somuenzaniso, ichapa zvakawanda rutsigiro kana rinorema unobatanidza zvinhu zvinofanira anotsigirwa.
Mureza pamwero hwemhangura ukobvu pamusoro mundege akaturikidzana ndiyo 35 microns. Rave, mhangura ukobvu dzimwe nguva kunoratidzwa muna Ounces kana magiramu. Zviri yakanakisisa kuenda nokuda kupfuura dzose mhangura ukobvu pamatanda kuti anotsigira yakawanda mafomu.
Tracks hadzina vavariro akatamisa simba, asi dzimwe nguva izvi zvinogona kuitika kana zviratidzo regai zvakanaka mubato frequencies. Kana dambudziko racho haina kudziviswa, pamakwara aigona anopedzisira kurasikirwa mikuru yakawanda simba. Kuti tiwane simba yakawanda kubva kudivi rimwe njanji kune mumwe, kuti marongerwo penzira anofanira azvidavirire nokuda hutachiwana equations.
Kazhinji, masendimita maviri ndiyo yakarurama njanji daro rukoko mapuranga kuti ine mhangura-yakawana FR4 pcb zvinhu, ichipa kuti mureza nguva ndeimwe nanosecond. Zvisinei, unofanira kufungawo migumisiro nokupfuuridzirwa mutsetse kuti mukuru njanji urefu, kunyanya kana chiratidzo kuperera kunokosha. The Internet izere zvirongwa uye Spreadsheets kuti akagadzirirwa kubatsira vanhu kuti zvakakodzera impedance Masvomhu kuti dzakananga rukoko mapuranga.
Pamatanda vakawanda, vias maturo, uye iwe unogona kazhinji kuona zvakanaka kuburikidza navo. Kunyange zvakadaro, pane mamiriro ezvinhu akasiyana-siyana pasi iyo vias anogona kuzadzwa. For Mutange, zviri zvakafanira kuti vias kuzadzwa panyaya nokuumba inodzivirira zvipingamupinyi neguruva uye nezvimwe netsvina. Chechipiri, vias kuti muzadzwe kuti vavandudze kutakura inogona kuitika, umo nyaya kuitisa zvinhu ingashandiswa. Chimwe chikonzero kuti vias kuti muzadzwe ndiko anoyera puranga.
Vias vari yemanyorero akazara bhora afoot kuko (BGA) zvidimbu. Kana kuonana kunoitika pakati BGA mbambo uye rukoko yomukati, solder aigona vapedzisire kuburikidza Via uye mugomo zvakasiyana rukoko. Naizvozvo, vias azara kuitira solder hazvirevi achigarira maoko mumwe layer uye kuvimbika vokukurukura vari kuramba sezvo aida.
Imwe unotambudza zvichiitika musi marongera bhodhi iri apo kuonana musisiri nokubuda dzimwe nguva achitevedza bhodhi. The zvakawanda izvi zvaitika, nokukurumidza kuti chikamu bhodhi mhoswa kupa zvachose. Paavhareji musha zvemagetsi User Unozonzwa dambudziko iri apo mumwe mabhatani ari karukureta hunomira kushanda. Mumwe bhatani runonditsikirira pasi imwe chikamu marongera puranga, uye kana chimwe gwapa inowana vainyeperwa, bhatani kuti correlates kuti panzvimbo havagoni kutumira chiratidzo chacho.
Imwe nzira contactsGoogle anogona kuzorwa kubva mune dzimwe nzvimbo kana yechipiri kadhi slots rakaiswa mugomo motherboard. Kana kadhi iri havaratidzi akazvibata, mumwe makwapa achitevedza kadhi aizowana tagovera otadza kushanda kubva ipapo kunze. Nzira yakanakisisa kudzivirira hukawanika kuti bhodhi kuti kukurukurirana mumwe ari kushandiswa marongera goridhe, iyo inoshanda somuganhu dzekugonesa upenyu-. Gold anogona Zvisinei kudhura, uye kushandiswa kwayo muna Tabs anowedzera rimwe danho iri nedanho pcb azoshandiswa.
Ruvara kuti vanhu vakawanda vanoziva kana totaura motherboards munyoro, ruvara soldermask. Kunyange kwete anenge sehwakajairika, soldermask uyewo dzimwe nguva anooneka mune mamwe mavara, akadai tsvuku kana mutema. Soldermask inonziwo nokuda Acronym LPISM, iyo inomirira mvura Photo imageable soldermask. Chinangwa soldermask ndiko kudzivisa leakage emura solder. Mumakore achangopfuura, incidences izvi zvava zvakawanda zvakajairika nokuda kusava soldermask. Zvisinei, By nenhoroondo vakawanda, vanoshandisa kazhinji vanoda mapuranga kuti soldermask pamusoro mapuranga usingarwadziwi.
Kamwe soldermask rave kushandiswa pcb, kuti pcb iri pasi solder wakaumbwa. Sezvo iyi kunoitika, akafumura hukawanika emhangura kuva solderized. Ichi chikamu zvose ane muitiro inozivikanwa mhepo inopisa solder munoenzanisa (HASL). Sezvo SMD machipisi vari soldered, bhodhi iri neshungu kusvikira apo solder anotanga yakaumbwa chimiro uye zvakamisa hurongwa vari kuisa panzvimbo yakakodzera. Sezvo solder Dries, zvakamisa hurongwa ivaiwo soldered. HASL inowanzoratidza kutungamirira somumwe yeimwe iri solder, kunyange mutobvu-vakasununguka kusarudza kuvapowo.
The spacing pamusoro njanji upamhi anoratidza nekamutsetse. Somuenzaniso, kana muchiona nhamba 6/6 mils, zvingadai tsanangurai 6 mils sezvo shoma njanji upamhi, uyewo shoma njanji spacing. Naizvozvo, spacings zvose pamusoro bhodhi iri mubvunzo vanofanira kana kusangana kana kupfuudza 6 mils. Nokuti avo kujairwa, mils dzakabatana dzinoshandiswa kuona madaro pamusoro pcb zvinhu. Upamhi uye spacing zvinonyanya kukosha kana totaura mapuranga kuti zvakagadzirirwa kubata mukuru yakawanda ano.
Kana pcb bhodhi iri multilayered, makwara siyana hazvigoni kuongororwa nemaziso nokuda Accessibility kwavo. Naizvozvo, muedzo rinoitwa kuti anoisa Yatanga Kuongorora pakupera pamakwara kuti ritsigire ose anonongedzera vari kuzadzisa. The bvunzo rinoitwa pamwe mafomu ose volts kubva kumugumo. Kana voltages aya akanzwa kubva mhiri, makwara vari vakafunga kuti kushanda ezvinhu. Nepo bvunzo haisi nguva dzose kunokosha pane mapuranga maviri akaturikidzana chete kana, Chichiri varumbidzwa kana hanya zvechokwadi unhu hwake.
Vias kuti batanidza dzomukati dzokunze akaturikidzana vanozivikanwa se bofu vias. The zita riri kunobva pakuti nekuti vias yakadaro inogona chete makwapa kubva divi. Vias kuti batanidza akaturikidzana maviri kana kupfuura yomukati vanozivikanwa se akavigwa vias, risingagoni makwapa kubva kunze nedivi. Pamatanda kuti ane vias bofu uye akavigwa, vachishandisa zvekupfakira inowanzoshandiswa. Izvi anochengeta kunze pamusoro akachengeteka zvikuru uye anobatsira ezasi mukana solder kunzvenga kuburikidza uye chichipinda yomukati vias.
Material pazviridzwa kukanganisa Cost
Pcb yemanyorero kutengwa kana rine zvinhu zvakadai Tabs goridhe, bofu kana kuvigwa vias, kana vachishandisa zvekupfakira. Saizvozvowo, pcb pamwe mutsetse / pahupamhi spacing pazasi 6 mils uyewo uderedze varasikirwe zvakawanda. Chikonzero izvi yepamusoro mitengo ndiyo humwewo muitiro kuti zvinopinda pagadzirwe kujairika pcb mapuranga. By chete chiratidzo, vamwe pcb nezvinobvamo kuti hazvina kusiri sezvo zvinobatsira kana kubudirira apo yakaderera mils kana yomukati vias anobudiswa, uye mutengo yepamusorosoro yakaiswa kuti recoup varasikirwa. Fabricators dziripo kuti zvibereko pcb pamwe mutsetse / pahupamhi kuyerwa yakaderera 3 mils, asi izvi kazhinji haana varumbidzwa kutoti yenyu pfungwa chete kuti imwe zvinoriumba.
Power uye Heat Impact musi pcb Material Selection
Kubva zvose zvinhu kunokanganisa PCBs, vaviri zvikuru nyanyisa ndivo simba nokupisa. Saka, zviri kunokosha kuona zvikumbaridzo nerimwe, izvo zvinogona kuitwa dzinoongorora chafariz conductivity ane pcb. Izvi rinotsanangura sei wattage simba riri kukava tembiricha kuburikidza nokureba acho. Zvisinei, hapana isingachinji indasitiri-kwazvo tsika kuti chafariz conductivity.
Somuenzaniso, Rogers Corp. kutakura pcb zvinhu, RT / duroid 5880, kuti kazhinji kushandiswa EW uye kukurukurirana. The dielectric kuramba iri zvinhu zviri pasi, sezvo zviri chine zvinhu kuti rine Micro-fibrous magirazi zvinhu. microfibers izvi kushumira chinangwa boosting nesimba faibha iri acho.
Nokuda ichi yakaderera dielectric rusingaperi, kuti pcb rakanakira mafomu kuti anoshandisa dzakakwirira frequencies. Zvisinei, nokuda mashoko vasina chafariz conductivity, rinogona kudziyisa nyore, izvo zvinogona kuva drawback huru nokupisa-nyanyisa mafomu.
Pcb Materials uye Industry Applications
Nokuti mafomu muchiuto uye Aerospace, motokari uye zvokurapa maindasitiri, PCBs anogadzirwa mune chete uyewo kaviri madziro mhando, zvimwe zvacho mhangura akapfeka uye vamwe kuti vashandise aruminiyamu. Pose maindasitiri izvi, mashoko inoshandiswa nokuda kunonyanyisa chaitwa mune zvatichakurukura. Zvazvakadaro, pcb zvokuvakisa vanosarudzwa lightweight unhu hwavo zvimwe maindasitiri kana kuti kukwanisa kwavo kugadzirisa dzakakwirira yakawanda simba nevamwe. Zvazvakadaro, kana kuita aptitudes vari kufungwa, zviri kunokosha yokusarudza inoshanda vanofanira kuenzaniswa mumwe pakusarudza pcb zvinhu, sezvo zvinhu mumatunhu Nenyaya Iyi kuti vaita nhanho.
Flex uye Hazvichinji-chinji-Flex Boards
Mumakore achangopfuura, flex uye vanachandagwinyira-flex mapuranga Vakawedzera kukurumbira nokuda nzira vanobvumira kuti mune rinoshandiswa zvakasiyana siyana. Zvikurukuru, vanogona iminame, akapeta uye kunyange rakamonera zvinhu, saka dzinogona kushandiswa kuzadzisa mafomu kuti aisazombofa kuva zvinogoneka sandara vematunhu mapuranga. Somuenzaniso, imwe flex bhodhi kungashandiswa kuti chimedu midziyo kuti zvaizoda munhu bhodhi kuti peta panguva necheparutivi uye vachiri kutakura kuitika kubva kurutivi rumwe kusvikira kuno rumwe pasina kudikanwa unobatanidza aenzana.
Ruzhinji flex mapuranga ari pamusika ine Kapton, mumwe polyimide firimu akanga dzakatangira neDare Dupont Corporation. Firimu Anozvirumbidza unhu hwakadai kupisa nemishonga, ndeiya yakaita kusachinja-chinja uye dielectric kuramba chete 3,6.
Kapton anouya matatu Pyralux mushanduro:
• Non-murazvo retardant (NFR)
• namira-shoma / yakakwirira waivako (AP)
Kuvasarudza pcb Board Materials - Quality First
Panyaya yaakasarudza pcb bhodhi zvinhu, unhu Zvinokosha pakuvaka chero mhando mungarava, kana zviri akaronga kuti musha zvemagetsi kana maindasitiri zvokushandisa. A rokuti kuti rine rakadhindwa redunhu bhodhi aigona kuva makuru kana madiki, zvakachipa kana dzinodhura, asi chii kukosha ndechokuti chinhu mune mubvunzo inopa mukuru kuita kuti uzere nguva yayo kutarisirwa lifespan.
Nepo kunongova wandei pcb zvinhu vachipinda kupiwa puranga, chigadzirwa kuvimbika runovawo chii vatengi uye mabhizimisi vari kutsvaka mune mishonga kuti kushandisa redunhu mapuranga. Chokwadi, zviri zvakare zvinokosha kuti pcb bhodhi zvinhu vane simba rokubata pamwe, kunyange kana munhu chinoumba netsaona chinozadzwa kwakadonha kana agogodza padivi.
On makombiyuta zvokushandisa Somuenzaniso, hunogara PCBs nechokwadi Hardware reserved zvinogona kuitwa pasina kuita kuvadza pre-huripo pcb bhodhi zvinhu. Izvi zvinoshandawo zvemagetsi mano, microwaves nezvimwe mhuri namano kuti kuvimba pcb michina kugara kushanda ezvinhu. Kunyange panguva zvemagetsi ruzhinji zvivako zvakadai ATMs, PCBs vanofanira kushanda pasina kukundikana saka mabhatani zvinoshanda uye mirayiro kunzwisiswa achaita tisinganonoki.
Panguva Wonderful pcb, tinopa yakazara zvakawanda pcb zvinhu uye neungano mabasa. Nokuda kwedu makore anopfuura 20 'bhizimisi ruzivo uye itsva ruzivo, pcb Anoshamisa anokwanisa kushandisa dzakasiyana laminate zvinhu uye substrate zvokuvakisa kusanganisira FR4, Rogers etc. kuti vari kupfuura dzakakurumbira uye zvikuru rikashandiswa. mabasa edu ave achishandiswa mainjiniya mhiri maindasitiri sectors, pamwe nemamwe zvinangwa kana totaura nokushanda uye functionality yenhengo dzinoshandisa pcb. Kuti udzidze zvakawanda pamusoro mabasa edu, shanyirai yedu gungano zvayakaita uye zvinogonekwa mapeji kana taura nesu kuti akatorwa pakarepo nhasi.